Indlela zibe mhlophe isikhumba?
Isimo isikhumba ongamtshela okuningi impilo yomuntu. Izifo eziningi unomkhuba omubi ukuba ashiye uphawu lwawo kuso. Kepha akusikho lokho kuphela induna kanye izibazi, enkingeni engengaphansi angabakhulula kanye lesikhumba ngokweqile: freckles, nezici nokunye okunjalo. Yebo, futhi nje isikhumba omnyama engenzi ivumelane wonke umuntu. Skin siphungule kusiza ukuxazulula ezinye izinkinga nge hyperpigmentation.
Nokho, kufanele kukhunjulwe ukuze ayibulale lesikhumba, kumelwe siqale siqonde ukuthi wabangela futhi ukuqeda imbangela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho kunengqondo ukuzibuza ukuthi mhlophe isikhumba. Kungenjalo izindawo izovela ngokuphindaphindiwe.
Yini engabangela hyperpigmentation? Izizathu okungenzeka eziningi, eziqala siphetfo ifa kanye Izilonda. Zofuzo, ukutheleleka, ukulimala, ukushintsha kwama-hormone - konke okungase babangela ukukhiqizwa kwe-melanin sithuthukiswe kumaseli ukwakheka kombala isikhumba. Amabala avele esizeni the induna extruded, ngemva kokusebenzisa indlu insingo phezu kwesikhumba underarm ngesikhathi sokukhulelwa. Abanye bahambe emva kokukhipha imbangela, abanye uyaxebuka kahle kulula, nezinye eside silungise.
Indlela zibe mhlophe isikhumba? Zonke izindlela siphungule zihlukaniswe amaqembu amabili: peelings, ukuthi nje ukususa isikhumba amangqamuzana afile, namaphilisi ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-melanin kumaseli. Omunye evame ukusetshenziswa isikhumba siphungule ejenti kuyinto hydroquinine. Nokho, kuyinto enobuthi kakhulu kanye nokusebenzisa kwayo kufanele uqaphele. Ngokuvamile ukhilimu kukhanya iqukethe% 1 kuphela azo zonke hydroquinine. Sebenzisa kanye nezinye izinto, kodwa zonke ucishe anobuthi.
Mhlophe isikhumba ebusweni nge okhilimu siphungule - kunalokho kuyabiza, futhi akubona bonke angaba namandla okuwunikela. Ngakho-ke, abantu abaningi banesifiso ukuthola nangezinye izindlela zokuxazulula izinkinga. Engadingekile kulokhu bayakuphendukela amakhambi abantu.
isikhumba mhlophe ekhaya ngosizo amakhambi abantu kuyoba ishibhile, kodwa kumelwe ukhethe ngokucophelela izindlela eziqondile, ngoba kukhona ingozi kokulimaza nesikhumba kakade-non-ekahle. Ngokwesibonelo, abaningi amakhambi mhlophe Folk okulungiselelwe ngesisekelo kalamula, kodwa sebenzisa wona abanikazi isikhumba esomile bengayi, ngoba lemon liyosula ke nakakhulu. Lesi sihloko ngeke anikele izindlela ezimbalwa.
Kufanele kuqale ezivamile, futhi ngenxa yalokho, ijusi lemon. Ngoba kuqala imaski 50 ml ijusi edingekayo, amaprotheni eyodwa, isipuni ushukela namanzi kabili. Zonke izithako okuxubile kahle, futhi imaskhi usulungile. It sisetshenziswa ukuhlanza isikhumba yehora, bese siyakazwe ngamanzi ngaphandle kokusebenzisa insipho kanye nezinye izindlela okugeza kuwo. Ngemuva kokufaka isicelo buso ku ijusi lemon qiniseka ukusebenzisa ukhilimu moisturize. Ukuze uthole umphumela omuhle, ukusebenzisa buso kabili ngosuku izinsuku okungenani 4.
Imiphumela emihle etholakala ngokuzikhandla nenye kalamula benomhluzi parsley. izithako ezimbili axutshwa ngamasheya alinganayo futhi agcinwe kule esiqandisini. I elangeni okuholela ukusula isikhumba kabili ngosuku.
Indlela zibe mhlophe isikhumba nge ikhukhamba? fake yakhe ukukuthinta u hlanganise ukhilimu omuncu. Esikhundleni ukhilimu omuncu, ungasebenzisa ukhilimu. Sebenzisa ebusweni imizuzu engu-20, bese ugeze off. Wenziwe kanye ngosuku izinsuku eziyi-10. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imaskhi ayigcini wenze njalo entsha.
Kusukela ezikhathini zasendulo ekhanyisa isikhumba wasebenzisa ubisi. Ziba buso esekelwe kuyoba ubugebengu. Ukuze silungiselele lokhu imaski ukulungiselela 50 ml we amasi kanye isipuni kafulawa oat. Ufulawa oatmeal kungenziwa grinder ezivamile. Ngemva ukuxuba izithako, unamathisele obukhulu etholwe, ibekwe phakathi ezimbili zamatshe gauze, okuyinto ke wagqoka ubuso for isigamu sehora. Khona-ke, isikhumba kufanele siyakazwe ngamanzi afudumele.
Zonke izimali - okungenani yasekhaya, ukukhiqizwa yezimboni Nokho, kudingeka uhlole ngaphambi ukusetshenziswa, bona kungabangela komzimba. Okokuqala, bajwayele endaweni encane isikhumba, isitheke emehlweni ka bangaphandle izingubo. Uma kwenzeka komzimba nezinto, ziyasebenza ebusweni kusho akudingekile.
Indlela zibe mhlophe isikhumba, uma ikhona abantu, yiziphi izindlela ifektri musa asize? Kufanele ubheke beautician futhi ibhekane izinqubo ku gumbi. Kungasiza izinqubo ezifana resurfacing kanye laser resurfacing. Nokho, ngaphandle iseluleko beautician akukuhle ukusebenzisa.
Indlela zibe mhlophe isikhumba sakho ekhaya (professional kanye Folk amakhambi)
Kuthiwani uma kukhona talc ebusweni bakhe indlela balahle kubo?
Skin amafutha: izinhlobo, izinzuzo, kobufakazi. Amafutha kangcono isikhumba ukunakekelwa
Isivuvu ka parsley imibimbi ekhaya: ikakhulukazi ukupheka, izindlela kanye nokubuyekeza
Indlela ukuqeda izinwele yobuso kakhudlwana?
Kabusha Military e 1874
"I-Vo Tarun" (phansi amacaka): amamodeli, ukubuyekezwa
Compote of plums kanye apula ebusika: zokupheka elula
Izinto ezingokwemvelo nokusetshenziswa kwawo e-Spain
Ukwelashwa Anticorrosion underbody
Ukuthenga e Greece: mncintiswano Milan
UPyotr Chaadaev - umbhali waseRussia, isazi sefilosofi sazi
Izinwele zikhula like crazy - iresiphi imaskhi futhi imiphumela kulindeleke ngokusebenzisa
Northern sesitimela: indima kuleli zwe